उबुन्टु को लागी एन्टिभाइरस, तपाइँको कम्प्युटर सुरक्षा गर्न केहि | Ubunlog
उबुन्टु को लागी एन्टिभाइरस, तपाईको कम्प्युटरलाई बचाउन केहि केहि छैन
अर्को लेख मा हामी केहि एक हेराई गर्न जाँदैछन् उबुन्टु को लागी एन्टिभाइरस। Gnu / Linux लाई हमला गर्ने बेलामा दिमागमा अन्तिम चीज हुन्छ जब यो भाइरस सम्बन्धी खतराहरूको लागि आउँछ, यो हामीले बेवास्ता गर्नु हुँदैन। Gnu / Linux ले विन्डोज प्रोग्रामहरू चलाउन सक्दैन भन्ने तथ्य (पाप रक्सी वा समान कार्यक्रमहरू) यसको मतलब यो होइन कि हामी सतर्क हुनुपर्दैन।
यी भाइरसहरू फैलिन सक्छन् विशेष गरी यदि हामीसँग साम्बा सर्भर वा बाह्य उपकरणहरू छन् जुन नियमित रूपमा Gnu / Linux र Windows सँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। हामी त्यो फेला पार्न सक्छौं हामी यसलाई नबुझी भाइरसहरू फैलाउँदैछौं हाम्रो नेटवर्क को माध्यम बाट।
त्यसो भए उबन्टुका लागि केहि राम्रा एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरू के हुन् जुन हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं? अन्य प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्नु अघि, हामीले सुरू गर्नुपर्दछ सावधानी अपनाउनुहोस्.
जुन उब्न्टुले हामीलाई "तुलनात्मक" बन्द भण्डार प्रस्ताव गर्दछ जब यो सफ्टवेयरमा आउँदछ जुन हामी डाउनलोड गर्न सक्छौं र मुख्य स्रोतहरू जुन हामी यसलाई डाउनलोड गर्छौं (उबुन्टु एपीटी पुस्तकालय), यदि हामी केही सावधानी अपनाउँदछौं भने हामी पर्याप्त सुरक्षित हुनुपर्छ। यदि तपाईं तेस्रो-पार्टी एन्टीवायरस चाहनुहुन्न तर तपाईं चाहनुहुन्छ उबुन्टुमा तपाईलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, पहिले निम्न प्रयास गर्नुहोस्:
स्क्रिप्ट अवरोधक प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको ब्राउजरमा (फायरफक्समा NoScript राम्रो विकल्प हो) फ्ल्यास र जाभा आधारित शोषणको बिरूद्ध सुरक्षा गर्न।
राख्न उबुन्टु अद्यावधिक गरियो, सम्बन्धित अपडेट र अपग्रेड आदेशहरू सुरूवात गर्दै।
प्रयोग गर्नुहोस् फायरवाल. गुफ यो राम्रो विकल्प हो।
यी दिमागमा राख्न केहि चीजहरू छन्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई पहिल्यै नै अभ्यासमा राख्नु भएको छ, तर अझै सुरक्षाको त्यो अतिरिक्त तह चाहानुहुन्छ भने, पढ्नुहोस्।
1 उबुन्टुको लागि केहि एन्टिभाइरस
1.2 ClamTk भाइरस स्क्यानर
1.3 सोफोस एन्टिभाइरस
1.4 लिनक्सको लागि कोमोडो एन्टिभाइरस
उबुन्टुको लागि केहि एन्टिभाइरस
यी उबन्टुको लागि केवल केहि एन्टिभाइरस हुन् जसले प्रस्ताव गर्दछ पर्याप्त प्रभावी र नि: शुल्क पहिचान:
क्लमएभि एक भाइरस स्क्यानर गर्न सक्ने छ Gnu / Linux डेस्कटप वा सर्भरमा चलाउनुहोस्। यो उपकरणको साथ, सबै भयो आदेश रेखा मार्फत। यस स्क्यानरले बहु थ्रेडहरूमा नजर राख्छ। यो सीपीयू उपयोगको साथ पनि धेरै राम्रो छ।
तपाईं सक्नुहुन्छ बहु फाइल प्रारूपहरू स्क्यान गर्नुहोस्, खोल्नुहोस् र तिनीहरूलाई स्क्यान गर्नुहोस्बहुविध साईन इन भाषाहरू समर्थन गर्दछ। यसले मेल गेटवे स्क्यानरको रूपमा पनि कार्य गर्न सक्दछ। यो भन्नु पर्दछ कि यदि तपाईंलाई Gnu / लिनक्स मा राम्रो भाइरस स्क्यानर चाहिन्छ र तपाईंलाई टर्मिनलसँग खेल्न आपत्ति छैन, तपाईंले ClamAV चलाउनु पर्छ।
ClamTk भाइरस स्क्यानर
ClamTk यो भाइरस स्क्यानर होईन तर ClamAV एन्टीवायरसको आफ्नै ग्राफिकल इन्टरफेस हो। यसको साथ तपाईं धेरै कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ जुन पहिले केहि गम्भीर टर्मिनल र ClamAV ज्ञान आवश्यक थियो। विकास टोलीले यो Gnu / लिनक्स मा मांग मा प्रयोग गरेर स्क्यानर को उपयोग गर्न को लागी सजीलो बनाउन को लागी डिजाइन गरिएको दाबी गर्दछ।
यो अविश्वसनीय प्रयोग गर्न सजिलो छ, तर यो नबिर्सनुहोस् यो ClamAV को शीर्षमा केवल एक ग्राफिक्स तह हो। यदि तपाईंलाई राम्रो भाइरस स्क्यानर चाहिएको छ र तपाईंलाई आदेश लाइन मनपर्दैन, ClamTk यो विचार गर्न एक विकल्प हो।
सोफोस एक सुरक्षा समूह हो जुन सुरक्षाको दुनियामा आफ्नो नाम कमाइरहेको छ। तिनीहरूसँग लगभग सबै चीजको लागि उत्पादनहरू छन्, दुवै भुक्तान गरिएको र नि: शुल्क समावेश सहित को एक उपकरण नि: शुल्क भाइरस स्क्यान Gnu / Linux को लागी। यसको साथ तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ 'वास्तविक समयमा शंकास्पद फाइलहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्तपाइँको लिनक्स मेशीनलाई विन्डोज, वा म्याक भाइरस फैलाउनबाट रोक्नको लागि।
लिनक्सको लागि कोमोडो एन्टिभाइरस
कोमोडो अहिले केहि समयको लागि हो र ती दुबै भुक्तानी र नि: शुल्क उत्पादनहरू प्रदान गर्छन्। सोफोस र एसेट जस्ता, तिनीहरू धेरै प्लेटफर्महरूको लागि सुरक्षा सफ्टवेयरको सम्पत्ति प्रस्ताव गर्दछन्। लिनक्सको लागि कोमोडो एन्टिभाइरस offers 'सक्रिय' सुरक्षा जुन फेला पर्दछ र ज्ञात खतराहरू रोक्न सक्छ जुन उनीहरू देखा पर्दछन्.
यसमा अन्वेषण अनुसूची प्रणाली पनि समावेश छ, जसले सुरक्षा बानी अनुसार हाम्रा उपकरणहरूको प्रयोगको योजना गर्न सजिलो बनाउँदछ। हामी ईमेल फिल्टर प्रयोग गर्ने सम्भावना फेला पार्नेछौं, जसले Qmail, Sendmail, Postfix र Exim MTA का साथ काम गर्दछ। त्यहाँ धेरै राम्रा सुविधाहरू छन् जुन सजिलै हाम्रो मेशिन वा नेटवर्कलाई भाइरस र मालवेयरको साथमा डुब्नबाट रोक्न सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » उबुन्टु को लागी एन्टिभाइरस, तपाईको कम्प्युटरलाई बचाउन केहि केहि छैन
ClamTk छवि पहिले नै प्रागैतिहासिक हो, संस्करण .5.25.२XNUMX यो जस्तो केही छैन।
कोमोडो एन्टिभाइरसको सन्दर्भमा मलाई याद छ कि उबन्टु १.16.04.०XNUMX समस्याहरूको बिना स्थापना गर्न केही फाइलहरू हराइरहेको थियो र अर्को वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्‍यो।
Dark_King लाई जवाफ दिनुहोस्
Chronobreak, एक टाइमर इलेक्ट्रोनको साथ बनाईएको
गुगल अर्थ प्रो, उबन्टु १ installation.०18.04 / लिनक्स मिनेट १ installation मा स्थापना